Norway’s GDP နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှတယ် – IX | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Business & Economics » Norway’s GDP နော်ဝေနိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေအဆင့်အတန်းမြင့်မားလှတယ် – IX	6
နိုင်ငံတကာ ငွေရေးကြေးရေးရံပုံငွေအဖွဲ့ (၂၀၁၀-၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၄ ချိတ်တာ
ကမ်ဘာ့ ဘဏ် (၂၀၀၅-၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၄ ဘဲ ထပ်ချိတ်တာ
စီအိုင်အေ ကမ်ဘာ့ဖြစ်ရပ်မှတ်တမ်း (၁၉၉၃-၂၀၁၁) ဇယား
အမှတ်စဉ် ၆ ချိတ်တာ
ဘယ်ဇယားဘဲကြည့်ကြည့် နော်ဝေပြည်သူတွေက တဦးချင်းဝင်ငွေများ ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝ နေတာ
US, Canada, Australia တို့ထက်ပင် ဟန်ကျမျက်နှာပွင့်နေတာ
၁၉၈၀ တုန်းက $ ၈၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ကနေပြီး
၂၀၁၀ မှာကျတော့ ၅၅၀၀၀ ပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်သွားလို့
တစ်ဆကနေ ခုနှစ် ဆ ဖြစ်နေတာ၊
မြန်မာ အတွက် အပြာ နုရောင် လိုင်းကြောင်း က အောက်နားမှာ “ဂျို” ကပ်နေတာ၊
နောက်ပိုင်းမှာ မဖြစ်စလောက် လှုပ်ရှား လာတာ၊
ယိုးဒယား အဝါလိုင်း က မြန်မာရဲ့ ၂ ပြန်ကနေ ၄ပြန် လောက်ရှိလာတာ
ယူအက်စ် (မြင်းချီးရောင်လိုင်း) က နော်ဝေ (အစိမ်းရင့်ရောင်လိုင်း) ထက် မြင့်တာ က
၁၉၈၀ ကနေ ၁၉၉၉ ဝန်းကျင်ထိ ဖြစ်တာ၊
ယင်းကာလနောက်ပိုင်း ဆိုရင် နော်ဝေ က နှစ်တိုင်းလိုလို သာလွန်နေတော့တာ
Data source: World Bank, World Development Indicators - Last updated March 2, 2011
၁၉၈၀ မှာ $ ၁၂၅၆၄
၂၀၁၀ မှာ $ ၅၁၉၅၉ (လေးဆဖြစ်လာတာ)
World Bank နဲ့ IMF တို့ ၁၉၈၀ အ စ ပိုင်း က ကိန်းဂဏန်းတွေ မတူသော်လည်း နော်ဝေရဲ့
ဝင်ငွေ က အဆင့်မြင့်တာ နဲ့တိုးတက်မှုပမာဏကြီးတာ ကိုတွေ့နိုင်တာ
၂၀၀၉ တွင် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကို အများဆုံးထုတ်လုပ်ကြတဲ့ ဆယ်နိုင်ငံ ဇယား
ရေးအားလျှပ်စစ် သုံးတာ နော်ဝေ က ထိပ်ကပါ၊ ယူအက်စ် က အမှတ်စဉ် ၁၀ က နေရာယူ နောက်ကလိုက်ရတာ
၁၄ ချိုး တချိုးဘဲ၊ တော်တော်ကွာတာ
နော်ဝေ ကဝင်ငွေ ကြီးတာက North Sea ပင်လယ် မှရေနံနဲ့ဓာတ်ငွေ့တွေတွေ့တာကအဓိက ဖြစ်တာ
သို့သော် ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အား အများအစားကို ထုတ်လုပ်ပြီး
အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေ ကို ရောင်းချ နိုင်တာ ကြောင့်လဲ အရေးပါတာ၊
Thu Jun 21, 2012 နော်ဝေ က ဂျာမဏီ နဲ့ ယူကေ သို့ ရေအား လျှပ်စစ် ဓာတ်အား ပိုမို ပို့ဆောင် ရောင်းချနိုင်ဘို့ ပင်လယ် အောက် ဓာတ်ကြိုးများထပ်ခင်းမယ်၊
နွေရာသီမှာလျှပ်စစ်ဓာတ်အား ဈေးကောင်းတုန်း ပိုမိုရောင်း ကာ၊ ဆောင်းရာသီ ကျတော့ ဈေးသက်သာချိန်မှာပြန်လည်ဝယ်ယူတင်သွင်းမယ်၊လို့ထုတ်ဖော်
htoosan says: သူတို့နိုင်ငံမှာ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်တာကတော့ သဘာဝ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ဘူးလားဟင် ..
ထိခိုက်ဘူးဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်မှာက တရုတ်မို့လို့ စိတ်မချတာလားဟင်င်င်င်င်…………….
Foreign Resident says: နော်ဝေက သူ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရဲ့ လိုအပ်ချက် ၉၈.၅ % ကို
ရေအား လျှပ်စစ် က ယူတာကိုး ။
မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ပါတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှာကို စိုးရိမ်ပြီး ၊
ရေအား လျှပ်စစ်ကို သိပ်ကြောက်နေရင်တော့ ။
သေချာတာကတော့ လျှပ်စစ် မပေးနိုင်ရင် ၊
ဘယ် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုမှ မလာဘူးကွယ့် ။
ခပ် မွဲမွဲလေးပဲ ဆက်နေကြတာပေါ့ကွယ် ။ :P
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2738
ဦးဦးပါလေရာ says: နိုင်ငံတခုရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု့ဆိုတာ
အခြားအရာတွေနဲ့ “ လဲ ” ယူရတာပါ..။
ကိုယ့်မှာရှိနှင့်တဲ့ တစုံတရာ(တွေ)နဲ့ “ လဲ ” ယူရတာပါ..။
အဓိကက မလဲ ဘို့မဟုတ်ပါဘူး..။
“မနာအောင် ” လဲတတ်ဘို့ နဲ့ “သာ” အောင် လဲတတ်ဘို့ပါ..။
အကျိုးစီးပွားကိုနားလည်တဲ့ စီးပွားရေးအမြင် ရှိဘို့လိုပါတယ်။
မောင်ပေ says: ကျုပ်တို့ဆီမှာ
ကြောင်ကြီး says: တရုတ်ကြီးရေ တာ့တာပါ….။ အဟတ် အဟတ်…….ခွိ ခွိ ခွိ….. မြန်မာပြည်ကို ဂျီအီးကုမ္ပဏီ စတင်ဝင်ရောက်
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့ အခြေစိုက် နည်းပညာနဲ့ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာ GE ကုမ္ပဏီ က မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ (၂) ရုံမှာ
ဆေးဖက်ဆိုင်ရာသုံး ကိရိယာတွေ တပ်ဆင်ပေးဖို့ သဘောတူ စာချုပ်ချုပ်ဆို လိုက်ကြောင်း ဒီကနေ့ ကြေညာလိုက်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံ (၂) ရုံမှာ နှလုံးစမ်းသပ်တဲ့ ဓါတ်မှန် ရိုက်စက် (၂) လုံးတပ်ဆင်ပေးဖို့ စာချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုက မြန်မာနိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေ ယာယီ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံး ဝင်ရောက်လာတဲ့ ကုမ္ပဏီ
ဖြစ်ပြီး GE ကုမ္ပဏီနဲ့ ဖက်စပ်လုပ်ကိုင်တဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက Sea Lion ကုမ္ပဏီဟာ ဒေါ်လာ (၂)သန်းလောက်သာ မတည်ငွေရှိတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ကုမ္ပဏီ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမေရိကန် ကုမ္ပဏီ (၃၇) ခုက လူပေါင်း ၇၀ လောက် ပါဝင်တဲ့ အဖွဲ့တဖွဲ့ဟာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံရေး အခွင့်အလမ်းတွေ ရှာဖွေဖို့
ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကပဲ အမေရိကန် သမ္မတ Barack Obama က မြန်မာနိုင်ငံမှာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု နဲ့ ရင်းနှီးမြုပ် ခွင့်တွေ ဖွင့်ပေးလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။http://www.thithtoolwin.com/2012/07/blog-post_9013.html#.UAIugVIsGmA
Victory says: လေးစားစွာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးကြည့်ပါရစေခင်ဗျ။
ဒေတာတွေအရတော့ ကားရဲန်း ကာရဲန်စီ(လက်ငင်းငွေလဲနှုန်းနဲ့တွက်ထားသောဒေတာများ)
စီးပွါးရေးပညာသဘောအရ ရီးရယ် (နှစ်တနှစ်ကိုစံထားတွက်နှုန်း/ ဒါမှမဟုတ်ဂျီဒီပီဒီဖလေတာနဲ့ညှိပြီးသား)
အင်ဖလေးနဲ့ညှိပြီးသား ဂျီဒီပီ ဒီဖလေတာနဲ့ စားပြီးသားကိန်းဂဏန်းတွေဆိုရင်တော့
ပိုပြီး ရီလိုင်းအေးဘယ် ဒေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးတော့ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းနည်းသော နိုင်ငံများဆိုပြီး သိပ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့မရပြန်
ပါဘူး။ ဒီဖလေး(ငွေကျစ်နှုန်း)ကလည်း ရေရှည်မှာ ဝယ်လိုအားမရှိသော ပစ္စည်းပုံကြီးတွေနဲ့
လုပ်ငန်းတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေး တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စီးပွါးပျက်ကပ်
ဆိုက်နေတာ ဥရောပနိုင်ငံတွေ၊အရှေ့အာရှကချမ်းသာသောနိုင်ငံတွေမှာ ထင်ရှားစွာတွေ့ရပါတယ်။
ငွေကြေးကိုတိုင်းတာတဲ့အထဲမှာ အဲဒီ ပီပီပီ နဲ့ တိုင်းတာကြီးကိုလည်းသိပ် သဘောမကျလှပါဘူး။
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ ပန်းသီးတလုံး၊ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတခုခုရဲ့ တန်ဘိုးကို ပုံသေထားပြီးနှိုင်းယှဉ်
တာကြီးဆိုတော့ ဝယ်လိုအား (ပီပီပီ = ပါချေးဇင်းပါဝါ ပရိုင်ရတီ) ရဲ့ ဈေးနှုန်းတခုထဲကိုဘဲ ကြည့်သလို
ဖြစ်နေတော့ ထုတ်လုပ်မှုစရိတ်နည်းတဲ့ နိုင်ငံအတွက် (သို့)ပစ္စည်းပေါတဲ့ နိုင်ငံအတွက် အသာစီးရနေ
ပြီးတော့ အမြဲတမ်းလိုလိုပါဘဲ အဲဒီ (ရိတ်=နှုန်း) တွေက ခုနက တိုင်းတာမှုအားနည်းနေပါတယ်လို့
ပြောနေရတဲ့ ကားရဲန်းရိတ်( လက်ငင်းငွေလဲနှုန်း) တွေနဲ့ တိုင်းတာ တာထက်ကိုအမြဲ “မြင့်” နေတာကလဲ
အရမ်းကြီးဘယ်နှစ်ဆ ဆိုတာမျိုးကိုတော့ စွတ်ပြောလို့တော့မသင့်လှပေဘူးလို့ ထင်မိပါရဲ့။
ဒီထက်ပိုပြောရရင် တိုက်ဂါးကြီးတော့ ဖွတ်ပရင့် လဲ မသေးပါဘူး။
ပြည်ပကြွေးမြီတွေက အဲဒီလိုဝင်ငွေကောင်းလှပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေက
စက္ကူပိုက်ဆံ (ခရက်ဒစ်ကာဒ်)တွေရဲ့ ကြွေးမြီဆိုတာလူတိုင်းမှာကိုရှိတာပါ။
ပြီးတော့ တဦးကျဝင်ငွေဆိုတာကလဲ လူဦးရေနဲ့ တတိုင်းပြည်လုံးရဲ့ ဂျီဒီပီကိုစားထားတာဆိုတော့
ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှုကြီးမားတဲ့ နိုင်ငံတွေဆိုရင်လည်း အားကိုးရတဲ့ ဒေတာတွေလို့မပြောနိုင်ပြန်ပါဘူး။
ဒါက ဝင်ငွေကောင်းနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေအတွက်ပါ။
စရိတ်ရဲ့ ဆယ်ပုံတပုံသောငွေနဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ သာမာန်မိသားစုနေလို့ပါတယ်)
ဆိုတော့ အဲဒီနိုင်ငံကြီးတွေရဲ့သာမန်ဝင်ငွေထက် ဆယ်ပုံတပုံတောင်မရရင်တော့
Comments By Postမျက်နှာကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ အသစ်အဟောင်းပြဿနာ - ခရီးသည်ကြီး - ကိုရင်စည်သူPassport လျှောက်မယ်ဆိုရင် - TheWinner Getprize - ကိုရင်စည်သူအတ္တဆန် - ခရီးသည်ကြီး - uncle gyiရခိုင်မင်္ဂလာဆောင် .... (1) - ကိုရင်စည်သူ - uncle gyiကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲတွေက ရတဲ့ အတွေး - nature - uncle gyiအဆိပ်ခတ်အဖွဲ့ကြီး မိလာပြီဗျ… ဘာလုပ်သင့်လဲပြောပြ… သတ်ပစ်…. သတ်ပစ် - TheWinner Getprize - TheWinner Getprizeမပြောင်းလဲခြင်းလမ်းကလေး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - rain pricessကား ဒုက္ခ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13နံရိုးကြံမဆိုင် မြီးရှေ easy cook - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဦးကြောင်ကြီး“ခေါင်းမာမနေဘဲ ပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ပါ” - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - TNAဘားလမ်းက ပြန်ဖို့ ဘက်စ်ကားခ မရှိတဲ့ နေ့က - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - Mobile13``တစ်ခါက အင်းယားရယ်´´ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ခင် ခနယ်မြေခံ စစ်တပ် ရဲ တို့ ငွေကြေး လာဘ်ယူကာ ပိုင်ရှင်မဲ့ ပစ္စည်းလုပ်ပစ်တော့မဲ့ ကုလားနဲ့ နွား သစ် မှောင်ခို ကိစ္စ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲရှုပ်တွံတေးအလှူ.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - kyaw hteikဘင်္ဂါလီ ကြေးမုံဂျီးနှင့် Patriot ကြောင်ကြီး အပိုင်း၂ ဇာတ်သိမ်း - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - phoe choကျွန်တော့်စိတ်ဓာတ် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးငါ ရဲ့ ငါ မဟုတ်တဲ့ ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးကဘာကျော်ကြီးရဲ့ ကဘာကျော်ကဘာ .. အဲ .. ကဗျာ - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးမော်ဒယ်လ် တဲ့လားကွယ် - Mလုလင် - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီးလူပါး ပုလင်းကွဲရှ - Ma Ma - uncle gyiယုံလား? - uncle gyi - KZပိတောက်ပန်းတွေကြူကြူဝေတို့အညာမြေပန်းတွေ - TNA - မောင် ပေ``ကျန်းမာရေးအတွက် အရက် နဲ့ အုန်းသီး(အုန်းရည်) အသုံးဝင်ပုံ´´ - KZ - TNAကျီးအာသီးနှင့်တူသော နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ - TNA - TNAသူ - ရွှေ ကြည် - KZနောက်တစ်ခါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါါ လာပြန်ပြီဟေ့ - Shwe Ei - Shwe Eiမိမိ ကိုယ် မိမိ ခိုးယူပေါင်းသင်းကြသူများ...။ - အရီးခင်လတ် - KZဖိုင်နယ်ပွဲ မှာ ပိုင်ရှယ်ဆွဲ (၂၅၇၄) - မောင် ပေ - မဟာရာဇာ အံစာတုံးလုပ်စားခံလိုက်ရတဲ့ ...... မဟာဆန်.... - ကမ်ဘာကျော် ရတနာ ဒေါက်တာ အံဇာကြီး - ဘဲဥEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities